यो झारमा हुन्छन् यस्ता औषधीय गुण, कसरी प्रयोग गर्ने ? – Life Nepali
प्रायः गाउँघरमा उम्रिने यो झारबारे सबै परिचित होलान् । ठाउँ अनुसार यसका विभिन्न नामहरु भए पनि यसको बैज्ञानिक नाम ‘पर्सलेन’ हो ।असार–साउनको महिनामा खेतबारी तथा पर्खालमा यो झार निकै मात्रामा उम्रिन्छ । मानिसहरु यसलाई जंगली बुट्यान ठानेर लुछेर मिल्काउँछन् ।यसमा पोषण तत्त्वहरू भरपूर मात्रामा पाइन्छ भन्ने विषयका सबैलाई जानकारी हुँदैन । घरमा उम्रने यो झार नफ्याँक्नुस् किनकी यसमा अनेकौं औषधीय गुण हुन्छन् । खाँदा यो बिरुवाको निकै स्वादिलो हुन्छ । यो बिरुवामा ओमेगा ३ प्रचुर मात्रामा पाइन्छ ।
ओमेगा ३ खासमा फ्याट्टी एसिड हो र यो माछा, अण्डा र माछाको तेलमा पाइन्छ । यो एसिडले दिमागलाई तेजिलो बनाउँछ भने हृदयघात हुनबाट जोगाउँछ पर्सलेनमा भएको एन्टीअक्सिडेन्टले तपाईंको छाला जवान राख्छ । अनि यसले शरीरको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाएर रोगहरूसँग लड्न पनि सहयोग गर्छ ।यो बिरुवा आहारमा समावेश गर्नुभएमा शरीरमा क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको कमी हुन पाउँदैन। तपाईंको हाड र दाँत बलियो हुन्छ।यसमा पोटेसियम पनि प्रशस्त हुन्छ । यसको पात खाँदा रक्तचाप सामान्य रहन्छ । यसमा आइरन पनि हुन्छ ।
शाकाहारीहरूका लागि आइरन पाउन मासुको साटो यही बिरुवा उपयुक्त हुन्छ।
पर्सलेनमा ९३ प्रतिशत पानी हुन्छ । यसको पात खाँदा तपार्ईंको शरीर आर्द्र रहन्छ। तपाईं स्वस्थ र फुर्तिलो हुनुहुन्छ । पर्सलेनमा भएको मेलाटोनिनका कारण यो खाँदा तपाईंलाई राम्रो निद्रा लाग्छ ।विभिन्न संक्रमणका कारण ज्वरो आएमा यो खाँदा ज्वरो नियन्त्रणमा पनि निकै उपयोगी मानिन्छ । महिलाहरुमा हुने अनियमित रक्तश्राव नियन्त्रण गर्न पनि यो झार लाभदायी मानिन्छ ।अनियमित महिनावारी हुने महिलाहरुमा यो झारको सेवनले नियमित गराउँने गर्छ । यसमा पाइने औषधीय गुणकै कारण कपाल झर्न रोक्ने तथा शरीरको छालालाई मुलायम र सुन्दर बनाउने काम गर्छ । यसलाई सागका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
Previous नवरात्रको पहिलो दिन घटस्थापना कसरी मनाउने ? यस्तो छ महत्व
Next आज भगवान सूर्यको विशेष दिन, नगर्नुस् भुलेर पनि यी काम